Ku habeyn XFCE oo leh Maareeyaha Mawduuca Xfce [+ Rakibaadda] | Laga soo bilaabo Linux
Maareeyaha Mawduuca Xfce waa codsi aad u fiican oo noo oggolaan doona inaanu qaabeyno kuweenna XFCE qaab fudud iyadoo ay ku uruurineyso dhammaan xulashooyinka u habeynta deegaankan Desktop-ka hal meel.
Ka dib markaan u habeynay sida aan u jecelahay, xitaa waan badbaadin karnaa dookhyadayada, iyo xulashooyinka kale.
Ku rakibidda gudaha Xubuntu waxaa lagu sameyn karaa adigoo raacaya talaabooyinka hoose:
sudo add-apt-repository ppa: rebuntu16 / waxyaabaha kale ee sudo apt-get update sudo apt-get rakib xfce-theme-manager
Si kastaba ha noqotee, haddii aan adeegsaneyno qaybinta kale, waxa aan kugula talinayaa waa soo dejinta labada nooc:
Soo dejiso binaries
Faylka waxaa ku jira feylasha lagama maarmaanka u ah 32 iyo 64 jajab, waa inaan fiiqnaa, helnaa galka u dhigma qaab-dhismeedkayaga iyo halka la dhigo:
chmod + x rakcasho.sh ./install.sh
Macluumaad dheeri ah gudaha Xfce-Fiiri. | Lagu arkay webupd8
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Ku habayn XFCE leh Maareeyaha Mawduuca Xfce [+ Rakibaadda]
Xfce way sii fiicnaaneysaa waana sii fiicnaaneysaa, markii loo geeyo GTK3 xitaa kuuma sheegi doono, waad ku soo laaban doontaa iyadoo dabadaadu lugahaaga u dhexeyso sida eey baqanaya. @ayaa
Waan ka shakisanahay .. waan ka xumahay inaan dhaho laakiin KDE waxaan ku daboolayaa dhammaan baahideyda. Kaliya waxaan ku laaban doonaa Xfce hadii xaaladeyda ay igu qasbaan.
Waxaan ka soo dhaqaaqay KDE ilaa XFCE maxaa yeelay KDE ma daboosho baahideyda, taas oo XFCE oo leh codsiyo GTK ah (oo aanan ka helin qt) ay ka dhigeyso mid hagaagsan 😀
Ma aqaano hadii XFCE ay gebi ahaanba aadi doonto GTK3 dhamaadka, waxay dhibaato badan ku keeni laheyd codsiyada sababo la xiriira heerka cusbooneysiinta. Waxaa laga yaabaa in XFCE ay si toos ah ugu boodaan GTK4 marka Gnome 4 soo baxo sanadka soo socda.
Aad baad u mahadsantahay! 🙂
wow man… waa heesihii ugu naxdinta badnaa ee aan abid arko. Haha xd
Ku jawaab rho
Hahaha, laakiin iyagu mawduucyadayda ma aha .. Waxaan ka soo qaatay bogga mashruuca. Waxaan u maleynayaa in hadafku yahay: Eeg inta foosha xun ee Xfce loo qaabeyn karo.
Runtu waxay tahay inay haa tahay, mowduucyadaasi waa inay ooyaan, laakiin dalabku wuxuu umuuqdaa mid wanaagsan.
Waxaan door bidaa inaan soo dejiyo jawiga jawiga ama iftiinka XFCE halkii aan ka soo dejin lahaa mowduucyadaas xirmada Plus! Windows 98.
LOL! Waa run. Laakiin haye, soosaaraha mawduucyadiisa waa inuu ku faraxsan yahay inuu wax ku soo kordhiyay bulshada. Qof waa inuu jeclaadaa.
Waxaan ku tijaabineynaa dib u soo celinta Debian.
Waad ku mahadsantahay qoraalka !!!!!!
Aad u fiican, XFCE-kayga ayaa sii fiicnaanaya.
Si daacadnimo ah waan usii wadi doonaa Muuqaalka iyo Maareeyaha Daaqada, in kastoo ay tahay codsi fiican.
Way igu habboon tahay aniga, oo hadda waxaan ku biiray XFCE. Taabashada mawduuca, qofna ma ogaan doonaa xalka mawduucyada GTK2 si loola shaqeeyo barnaamijyada GTK3 sida Transmission Bittorrent?
Waa hagaag waxay kuxirantahay mawduuca aad isticmaaleyso, waxaa jira qaar aan la cusbooneysiinin noocyada ugu dambeeya ee GTK sidaa darteed (waxaan u maleynayaa) waa inaad ku bedeshaa mawduuca gacanta.
Uhhm, taasi aad ayey iigu dhib badan tahay aniga .. Waxaan qiyaasayaa inay tahay inaan sugno mawduucyada GTK3 ee wanaagsan ee XFCE si ay uga soo baxaan jeceylkayga ..
da 'da' dijo
waaw. Waan soo dejisan lahaa haddii aysan ahayn hal shay: Ma xiiseynayo XFCE
U jawaab si aad u xanuujiso da'da
Iyada oo wixii Xfce ay u keento si ku filan ayaa aniga igu filan, laakiin waxaa laga yaabaa inay waxtar u leedahay qof.
Waxaan sidoo kale aad u isticmaalaa gtk-theme-config wax badan si aan u beddelo guddi iyo midabbo app.
Haa, laakiin waa inaan qiraa inay dhaaftay GNOME 3 waxqabad iyo hufnaan. Haddii Debian 7 ay cusbooneysiiso GNOME 3.4 ilaa 3.6, ka dib waxaan u guuri doonaa XFCE xitaa haddii ay tahay inaan ka saaro dekedda.
Waan kugu raacsanahay, Xfce waan ku samayn karaa wixii aan ku sameeyay GNOME aniga oo aan cunin ilo badan (taas oo aniga igu habboon maxaa yeelay kombuyuutarkaygu wax cusub ma aha, aan dhahno) iyo indho fiiqis wanaagsan.
Maxaad u jeedaa
Mid kale oo ku soo biiray xfce waqti hore, waan qori doonaa haddii ay dhacdo inaan ku jahwareeriyo dulucda
Aynu isku dayno inaan aragno sida. Mahadsanid.
Phoenix phynx dijo
Sida loo tirtiro maxaa yeelay xirmooyinku way dhammaadeen
Ku jawaab fenix phynx
Xiriirinta soo dejintu mar dambe ma shaqeyso 🙁
Waan rakibay, waxay ila egtahay wax cajiib ah, mahadsanid
Inta badan Akhriso Aan Isticmaalno Linux: May 2013